Khaalid Cali-Guul Warsame – Taariikhyahan Soomaaliyeed oo galbaday • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Khaalid Cali-Guul Warsame – Taariikhyahan Soomaaliyeed oo galbaday
Khaalid Cali-Guul Warsame – Taariikhyahan Soomaaliyeed oo galbaday
Posted: Hanad Askar - October 31, 2011 Leave a Comment
Khaalid Cali Guul
Taariikhdu marjey ahayd, 29 Oktoobar 2011-kii, waxaan xaflad ay isugu yimaadeen qalin-maal, suugaan-maal iyo dadweyne fara badan, oo ka dhacday magaalada London ee waddanka UK, aan ku soo bandhigay milicsiyo ka mid ah buuggii dhaxal-galka ahaa ee uu qoray Khaalid Cali-Guul Warsame – waa buuggii Hirarkii Taariikhda iyo Halgankii Soomaalida. Buugga, oo marka la fiiriyo sida farshaxannimada leh ee uu u qoran yahay, taariikhda dahabka ah ee uu xambaarsan yahay, sawirada muunadaysan iyo luuqadda macaan, ay adagtahay in qofkii bilaabaa, isagoon ka bogan uu dhulka dhigo, kii dhammeeyaana uu wax badan ka baado, ayaan sadarro kooban oo ka mid ah la wadaagay dadkii madasha isugu yimid. In kastoo dadkii oo dhammi u riyaaqeen buugga, haddana, waxaa ishaydu si gaar ah u qabanaysey dhowr oday, oo markii hore dareen ka muujiyey, taariikhda iyo sooyaalka Soomaalida ee sii lumaya, oo markii ay maqleen macluumaadka buuggu xambaarsan yahay wajigooda farxad laga dheehanayey.
Khaalid Cali-Guul Warsame, Eebbe (SW) ha u naxariisto, Jannadii Firdowasana ha ka waraabiyo, wuxuu ahaa aqoonyahan ku xeeldheer taariikhda, suugaanta, hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Dhinaca taariikhda, Khaalid waxa uu qoray dhowr buug oo ay ka mid yihiin: Hirarkii Taariikhda iyo Halgankii Soomaalida, Taxanihii Taariikhda Soomaaliyeed 1 iyo 2 iyo Xiriirkii hore ee Bulshada Soomaaliyeed. Dhinaca dhaqanka, hiddaha iyo suugaanta, marka laga sootago suugaanta badda ah ee Khaalid tiriyey, wuxuu sidoo kale qoray dhowr buug oo ay ku urursan yihiin Suugaanta Geela, maahmaahyo iyo dhaqanka Soomaalidu. Dhinaca sheekooyinka, Khaalid wuxuu curiyey dhowr sheeko oo ay ka mid yihiin: Guur la qariyey, Jacaylkii Qaxu jiiray, Sheeko Xariir, iyo Maxaa ka qabsaday qurbaha.
Khaalid, Eebbe ha u naxariistee, wuxuu sidoo kale gacan weyn ka geystey sidii jiilka ku koraya qurbuhu u heli lahaayeen buugaag ay ka bartaan luuqaddooda, diintooda iyo dhaqankooda. Buugaagta Khaalid tarbiyada, diinta iyo barashada af-Soomaaliga ka qoray waxaa ka mid ah: Tubta waxbarashada 1 iyo 2, Tarbiyadda Islaamka, Beerta Xayawaanka iyo Koobaha Caruurta. Khaalid wuxuu sidoo kale qoray qaamuus ama koobe kulmiyey wax ka badan 50,000 oo erey.
Khaalid , Eebbe (SW) ha u naxariistee, wuxuu ahaa maktabad koobtay taariikhdii iyo sooyaalkii Soomaalida. Wuxuu ahaa nin hammi sare leh, ku hawlan, naftiisana u huray horumarka mujtamaca. Wuxuu ahaa hawl kar ma daalle ah. Wuxuu ahaa nin Alla ka cabsi iyo cibaado ku caan baxay. Wuxuu ahaa run-sheeg xaq-soore ah.
Waxaan hubaa in qof kasta oo arkay, maqlay ama akhriyey mid ka mid ah buugaagta Khaalid Cali-Guul Warsame, in marka uu maqlo geerida Khaalid, uu ka murugoonayo, Eebbena dembi dhaaf iyo jannadii firdowsa u waydiinayo.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Jubbaland oo Kismaayo lagu diley
October 18, 2017 By HORSEED STAFF
October 18, 2017 By Mohamed Jeenyo
Dhakhaatiir iyo Deeq Daawo ah oo ay Dirtay Puntland oo Muqdisho Gaartay
October 18, 2017 By Omar Akhyaar
Maxay Dowladda Federaalku Ku Soo Bandhigi Doontaa Baaritaanka Qaraxii Zoope?